ထိပ်တန်း 20 iPhone နဲ့ iPad App များနှင့် The Month ရဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲ - သတင်း Rule
ထိပ်တန်း 20 iPhone နဲ့ iPad App များနှင့် The Month ရဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲ
automated Anchor နှင့်အတူအသံထုတ်လွှင့်ဖို့ Serato Pyro နှင့်အတူ DJing မှစ., အဆိုပါလမ်းလျှောက်သေမှတဆင့်, Final Fantasy IX နှင့် Kendall & Kylie Jenner
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ထိပ်တန်း 20 iPhone နဲ့ iPad app များကိုနှငျ့အလ၏ဂိမ်းများကို” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 2nd မတ်လအပေါ်များအတွက် 2016 15.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Apple ရဲ့ iOS ကို app သစ်အကြံဥာဏ်များနှင့်တီထွင်ဂိမ်းထဲမှာတစ်ဦး hotbed ဖြစ်ဆက်လက် 2016, developer များကုမ္ပဏီရဲ့ App Store တွင်အောင်မြင်မှုကထွက်ဖျက်သိမ်းရန်ဆက်လက်အဖြစ်.
အသစ်ထွက်ရှိခြင်း၏နောက်ဆုံးလရဲ့သီးနှံကမ်းလှမ်းမှုကိုမှပဒေသာရှိပါတယ်, သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာအလိုအလျောက် DJ သမားနှငျ့သငျမှ chat တဲ့သတင်း app ကိုမှ, ကလေး-feed ကိုခြေရာခံခြင်းနှင့်မျက်စိကန်းသောနှင့်အမြင်အာရုံ-ချို့ယွင်းကလူများအတွက် tool ကိုမှတဆင့်.
ဤတွင်အသစ်၏ဂါးဒီးယန်းရဲ့ရွေးဖြစ်ပါသည် - အမှတ်တံဆိပ်အသစ်၌ရှိသကဲ့သို့, ရုံ updated မ - လွန်ခဲ့သည့်လမှ iPhone နှင့် iPad app များကို: 10 apps များနှင့် 10 ဂိမ်းများ. စျေးနှုန်းများအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကမှန်ကန်သောများမှာ, နှင့် "IAP" In-app ကိုဝယ်ယူအသုံးပြုမှုနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြ.
အစားအန်းဒရွိုက်အကြံပြုချက်များရှာဖွေနေ? သီးခြားရှိပါတယ် roundup အကောင်းဆုံး Android apps နှင့်ဂိမ်းများ အဲဒီအတွက်.
iPhone အတွက် Serato Pyro
Serato Pyro (အခမဲ့)
Serato Pyro မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ DJ သမားဖြစ်ပါတယ်, ချောမွေ့စွာအတူတူသင့်ရဲ့သီချင်းတွေကိုသို့မဟုတ် Spotify ဖွင့်စာရင်းများကိုရောစပ်, သငျသညျလိုလျှင် - - လည်းစဉ်ဂီတသင်တို့၏စမ်းချောင်းလာမည့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါအပုဒ်အကြံပြုခြင်း. အိမ်သူအိမ်သားပါတီများအတှကျစုံလင်သော tool ကို, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အဖြစ်ကောင်းသောသင်တို့အားလုပ်ကိုင်ဖို့ဂီတ၏တစ်ဦး session ကိုတက် cueing တဲ့အခါ.
Messaging app များပူကြ၏! လူတိုင်းသည်သတင်းလိုလား! ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်နှစ်ဦးပေါင်းစပ်မဟုတ်?! ဒီ Quartz ရဲ့ဇာတ်ဆောင် app သစ်နောက်ကွယ်ကယုတ္တိဗေဒဖြစ်ပေါ်လာသော, စာသားတစ်ခုရောစပ်အဖြစ်ပုံပြင်များပြောပြတယ်သော, ဓာတ်ပုံများ, GIF များနှင့်လင့်များ, အားလုံးနက်ရှိုင်းတူးဖို့နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများကိုအတူသင်တို့ပြတဲ့ချက်တင်ကဲ့သို့ပြတင်းပေါက်အတွင်း.
လောလောဆယ်တစ်ဦးကိုဗြိတိန်သာ app ကို, ဒီဘီဘီစီရဲ့ TV နဲ့ရေဒီယို output ကိုမှဂီတသမားနှင့်အတူတိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုနှင့်အင်တာဗျူးများအတူတကွဆောင်တတ်၏, အဖြစ်က၎င်း၏ DJs ဖြင့်တာဝန်ယူထားသောဖွင့်စာရင်းများကို. သငျသညျက၎င်း၏အကြံပြုချက်များမွမ်းမံအသုံးပြုအဖြစ်ဒီ app ကိုသင့်အရသာသိ, အပြည့်အဝအတွက် - Spotify သို့မဟုတ် Deezer မှတဆင့် - 30 စက္ကန့်ကလစ်များသို့မဟုတ်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသီခငျြးမြားနှငျ့အတူ.
glow ကလေး (အခမဲ့)
Glow ရဲ့ယခင် apps များအမျိုးသမီးတွေသူတို့ရဲ့ကာလနှင့်ကိုယ်ဝန်ကိုခြေရာခံကူညီပေးနေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပြီ, ဒါကြောင့်ကလေးအဘို့တယောက်သူတို့နှင့်အတူလိုက်လျှောက်ရန်သဘာဝကျပါတယ်. ဤသည်ရင်သားကင်ဆာသို့မဟုတ်ပုလင်း feeds တွေကိုခြေရာခံအကြောင်းကိုမဖြောင့်: သင်သည်လည်းအိပ် log မှအသုံးပွုနိုငျ, nappy အပြောင်းအလဲများ, အလေးချိန်နဲ့အခြားမှတ်တိုင်.
BuzzFeed ဗီဒီယို (အခမဲ့)
BuzzFeed ရဲ့အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောဗီဒီယို output ကိုစောင့်ကြည့်ဘို့အကောင်းတစ် app ကိုပြီးသားရှိပါတယ်: YouTube ကို. ယခုမူကားသတင်းဆိုက်က၎င်း၏ဗီဒီယိုဌာနခွဲတစ်ခုကို standalone app ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်, ပြသထားတယ်သင်တစ်ဦးအသစ်ဇာတ်လမ်းတွဲရှိသည်ဖို့ပေးသွင်းပြီးင့်သောအခါသတိပေးချက်အပါအဝင်, လူကြိုက်များဗီဒီယိုများဆိုတာတွေ့ရဖို့နဲ့တစ်ဦးရေပန်းစား feed ကို.
ပါမောက္ခ Astro ကြောင်ရဲ့နေရောင်ခြည်စနစ် (£ 2,29)
သားသမီးတို့အဘို့နာမည်ကြီးသိပ္ပံပညာစာအုပ်အပေါ် အခြေခံ., ဒီကလေးတွေကိုအာကာသအကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ရရည်မှန်းတဲ့လှလှပပဒီဇိုင်း App ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသူတို့ကိုအာကာသယာဉ်ရှာဖွေစူးစမ်းရရှိသွားတဲ့, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစာသားနဲ့ပျော်စရာနှင့်အတူဂြိုလ်နှင့်လ, ရောင်စုံဇာတ်ကောင်. ဒါဟာခွောကျသှေ့ဘယ်တော့မှဖွင့်, ဒါပေမယ့်အတွက်အချက်အလက်များ၏အံ့သြစရာငွေပမာဏကိုတပ်ဆင်ထား.
app တစ်ခုလေဆာ-အာရုံစူးစိုက်ဗီနိုင်းခေါင်းပေါ်မှာ, ဒီမှာ: နာမည်ကျော် Discogs ဝက်ဘ်ဆိုက်၏တရားဝင် app ကို. အသစ်မှတ်တမ်းများဝယ်ယူသည့်အခါထွက်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းမှုကိုရည်ညွှန်းရန်အသုံးပွုနိုငျ, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် Discogs '' ကိုယ်ပိုင်ဈေးအပေါ်စျေးနှုန်းတွေစစ်ဆေးနေ, နှင့်သင့်လိုချင်သောစာရင်းအသစ်တွေ့ရှိချက်ထည့်သွင်း.
အိပ် (အခမဲ့ + IAP)
ဤသည်ပင်မျက်စိကန်းနှင့်အမြင်အာရုံ-ချို့ယွင်းလူတို့အဘို့စမတ်ဖုန်း၏အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသုံးဖြစ်ပါသည်: အစစ်အမှန်လောကရှိတ္ထု၏ဓာတ်ပုံများကိုယူမှ၎င်းတို့၏ device ကိုရဲ့ကင်မရာကိုအသုံးပြုခြင်း, ထိုသူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာခွဲခြားသတ်မှတ်. ဒီ app အသေးစိတ်ထုတ်ဖတ်မှ Android ရဲ့ TalkBack ကိုအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုသည်, ကို double-ပုတ်မျက်နှာပြင်အားဖြင့်ရိုက်ယူခဲ့သည်ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ.
TapTapSee (အခမဲ့ + IAP)
ဤသည်ပင်မျက်စိကန်းနှင့်အမြင်အာရုံ-ချို့ယွင်းလူတို့အဘို့စမတ်ဖုန်း၏အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသုံးဖြစ်ပါသည်: အစစ်အမှန်လောကရှိတ္ထု၏ဓာတ်ပုံများကိုယူမှ၎င်းတို့၏ device ကိုရဲ့ကင်မရာကိုအသုံးပြုခြင်း, ထိုသူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာခွဲခြားသတ်မှတ်. ဒီ app အသေးစိတ်ထွက်ဖတ်ရှုဖို့အတွက် iOS ရဲ့နောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုသည်, ကို double-ပုတ်မျက်နှာပြင်အားဖြင့်ရိုက်ယူခဲ့သည်ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ.
နောက်ဆုံး, စိတ်ကူးယဉ်ဘောလုံး၏ကောင်းစွာထူထောင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုလှည့်ကွက်. ဒါဟာသင်ပုံမှန်အတိုင်းအဖြစ်အချို့သောဘောလုံးသမားကောက်ဖို့ရရှိသွားတဲ့, ထိုအခါမူကား, နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာမိတ်ဆွေတွေဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင် - စစ်မှန်သောငွေနှင့်ရှယ်ယာမှာသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်.
တိုတောင်းသော, ချွန်ထက်သောတိုက်ပွဲများ ... iOS အတွက် Royale ထိပ်တိုက်တွေ့
Royale ထိပ်တိုက်တွေ့ (အခမဲ့ + IAP)
ဒီ Supercell ကနေအချိန်ကြာမြင့်စွာမျှော်လင့်လာမည့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်: Clan ၏တိုက်ပွဲများနောက်ကွယ်ကကုမ္ပဏီ, hay နေ့နှင့် Boom သဲသောင်ပြင်. ထိပ်တိုက်တွေ့ Royale ကဒ်-Battle နှင့်မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးအမျိုးအစားအကြားတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြစ်ပါသည်, သင်သည်သင်၏သူရဲကတ်များကိုစုဆောင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အဖြစ်, တိုအတွင်းကမ္ဘာတဝှမ်းကစားသမားတွေအပေါ်ယူ, ချွန်ထက်သောတိုက်ပွဲများ.
လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ: Michonne (£ 3.99 + IAP)
ဤသည်အဆိုပါ Walking Dead အပေါ်အခြေခံပြီးကိုအခုမှအားကစားပြိုင်ပွဲမြတ်သော Episode-စွန့်စားမှုစီးရီး၏ပြန်လာ - ထိုရုပ်ပြစာအုပ်များ, မှတ်စု. ဒါကအဓိက plotline ထံမှ Michonne ဇာတ်ကောင်ရဲ့မရှိခြင်းအပေါ်အလေးပေး, သူမလုပ်နေခဲ့ရာ (Non-ကိုလုယူသောသူ: ဖုတ်ကောင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြတယ်). ဒါဟာအခြားအလွန်အမင်းဖွင့ ်. စွန့်စားမှုရဲ့, လာဖို့ပိုဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူ.
_Prism (£ 2,29)
"သန့်ရှင်းသောဂျီသြမေတြီဆက်ရေးနှင့်အီဝိညာဉျကိုရောက်ရှိရန်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်ပုံစံများကိုထိ,"_Prism များအတွက် App Store ကိုစာရင်းကဖိတျချေါ, အရာအပေါင်းတို့ကိုသင့်ရဲ့အသစ်-အသက်အရွယ်-blather သတိပေး klaxons ပယ် ထား. စေခြင်းငှါ. ဒါပေမဲ့ဒီတစ်အလွပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, အဲဒါကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ရှင်းပြဖို့ခက်ပါတယ်လျှင်ပင်: သငျသညျက၎င်း၏လှပသောဂျီဩမေတြီကမ္ဘာမှတဆင့်ပဟေဠိနှင့်တိုးတက်မှုဖြေရှင်းဖို့ပုံစံမျိုးစုံအပေါ်ကိုအသာပုတ်.
Bits ရန်သင်က Love (£ 2.99)
App Store မှာအပေါ်တစ်ဦးပိုင့်များ၏စျေးနှုန်းထက်လျော့နည်းကုန်ကျကြောင်းဂိမ်းဟာအလွန်ကောင်းသောလတစ်လခဲ့. Bits ရန်သင်က Love အဘယ်သူ၏စက်ရုပ်ရည်းစားကတော့ galaxy ဖြတ်ပြီးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားခဲ့တဲ့အာကာသစူးစမ်းရှာဖွေသူ၏ပုံပြင်ကိုပြောပြ. ဖြေရှင်းပေးဖို့ကောင်းစွာ-လက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အချို့သောတီထွင်ပဟေဠိနှင့်အတူတစ် Point-and-ကိုထိပုတ်ပါစွန့်စားမှုရဲ့.
တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့စျေးနှုန်း (မိုဘိုင်းစည်းကမ်းချက်များ၌) ကြီးမားတဲ့ဂိမ်း - ဤ 3.9GB မှာအလေးချိန်. သင် Final Fantasy ဂိမ်းချစ်ကြလျှင်, သော်လည်း, ဒါကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အာကာသကောင်းစွာရကျိုးနပ်မယ့်. ဒါကဂန္ RPG ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သစ္စာစောင့် touchscreen ကမှဘာသာပြန်ထားသော. သငျသညျဂိမ်းရန်သင့်လူငယ်သို့မဟုတ်အသစ်ကနေ replaying နေပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့.
စူပါ Tribes (အခမဲ့ + IAP)
စူပါ Tribes "ဤလောကအာဏာရအကြောင်းကိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, မကောင်းသောအ AI အမြိုးအနှယျအတိုက်ခိုက်နေ, "သစ်ကိုအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်အသစ်နည်းပညာများကျွမ်းကျင်. အကျွမ်းတဝင်အသံ? Yup. ဒီအကြီးအကျယ်အ Civilization ဂိမ်းအားဖြင့်မှုတ်သွင်းသည်, ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများအတွက်: ဒါကြောင့်နောက်ကျောမူရင်း Civ ကစားရန်ပေါက်ကွဲမှုင်, နှင့်သင့်ဖုန်းပေါ်မှာအလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်.
အမည်းရောင်သေတ္တာ (အခမဲ့ + IAP)
"box ကိုပြင်ပမှာထင်" ရန်သင့်အား ဖိတ်ခေါ်. တစ်ဦးကဂိမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဗန်းစကား၏အဆိုးဆုံးကြင်နာကဲ့သို့မြည်, ဒါပေမဲ့ဒီမှာစစ်မှန်တဲ့င်: Blackbox touchscreen ကပေမယ့်အရာအားလုံးကိုအသုံးပြုပဟေဠိတစ်ခုစီးရီးဖြစ်ပါသည်. အစား, ဖြေရှင်းနည်း tilt မှတဆင့်တှေ့ရှိ, ပြောနေတာနဲ့ရွေ့လျား (အခြားသူများအကြား). ဒါဟာအလွန်လိမ္မာပါးနပ်င်, ဒါပေမဲ့အရမ်းပျော်စရာ.
Assassin ရဲ့ Creed အထောက်အထား (£ 3.99 + IAP)
သင်ကကစားရန်မကြာသေးမီက-လုံလောက်တဲ့ကို iOS device ကိုရရှိပါသည် အကယ်., ဒီသေးဆုံး console ကိုကဲ့သို့ Assassin ရဲ့ Creed မိုဘိုင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရောစပ်ကိုမျှော်လင့်, သတ်ဖြတ်မှုနှင့်… ကောင်းစွာ, ပိုပြီး sneaking နှင့်သတ်ဖြတ်. ဒါဟာဂိမ်း၏ပရိတ်သတ်တွေပျော်မွေ့လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးပွတ်ဂိမ်းရဲ့, ထိုသို့ကောင်းစွာလွန်းအသစ်တချို့ကစားသမားကိုဆွဲဆောင်စေခြင်းငှါ.
တင်းနစ်ကလပ် Story (£ 3.99)
သငျသညျဂျပန် developer များ Kairosoft ၏လုပျငနျးအသစ်ဆိုရင်, ဖြစ်ကောင်းဂိမ်း Dev မှ Story နှင့်အတူစတင်, အနောက်ဘက်တွင်၎င်း၏အမည်ကိုဖွဲ့သောခေါင်းစဉ်. တင်းနစ်ကလပ်အတ္ထုပ္ပတ္တိလည်းကောင်းတစ်ဦးဟန်ပြဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးစွဲလမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-ခြင်း simulation (အဘယ်သူမျှမ, အမှန်) သင်တို့ကိုတစ်တင်းနစ်ကလပ်ပြေးခဲ့သည်. ဒါဟာထူးခြားပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ Charm ပယ်ကိုလှုပ်ဖို့ခက်ခဲ.
Kendall နှင့် Kylie (အခမဲ့ + IAP)
Kim Kardashian: ဟောလိဝုဒ်မိုဘိုင်းထုတ်ဝေသူ Glu မိုဘိုင်းများအတွက်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အလားတူ Katy Perry Pop ဂီတနောက်ဆက်တွဲ Edgar မှာခဲ့. အခုတော့ကုမ္ပဏီပိုပြီးအောင်မြင်မှုရှာဖွေရေးအတွက်အမေရိကန်တီဗီရဲ့အကြိုက်ဆုံးအဖြစ်မှန်-ပြပွဲမိသားစုမှပြန်လည်ဦးတည်သွားနေသည်. Kendall နှင့် Kylie အ Jenner အစ်မတွေအပေါ်အလေးပေး, ကျော်ကြားမှုရန်သင့်ဇာတ်ကောင်ရဲ့ခရီးဆရာအဘယ်သူသည်.
ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေးင်, ယခုသင်ထင်သောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ. အဆိုပါမှတ်ချက်တွေအပိုင်းအပေါ်က app များနှင့်ဂိမ်းများအပေါ်သင်တို့၏အကြံအစည်များအတွက်ဖွင့်, ငါတို့ကဲ့သို့လွဲချော်ကြောင်းသစ်တွေအဘို့သင့်အကြံပြုချက်များ.
၏အကောင်းဆုံး Android apps များ 2015
25450	2 ပန်းသီး, App များ, အပိုဒ်, အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad app များကို, ယဉ်ကျေးမှုကို, အားကစားပြိုင်ပွဲ, IOS ကို, iPad, iPhone ကို, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, စမတ်ဖုန်း, စတူးဝပ်သောင်, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ
← အဆိုပါ Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Humanoid စက်ရုပ်တွေ့ဆုံရန် [VIDEO] အပြာရောင် Lola နားကြပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →